Iflethi entle kaElina, embindini - I-Airbnb
Iflethi entle kaElina, embindini
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguStaša Elina
UStaša Elina yi-Superhost
Iflethi yethu etofotofo ikwindawo ezolileyo eLjubljana, malunga nemizuzu eyi-20 xa uhamba ngeenyawo ukusuka embindini wedolophu. Isikhululo sebhasi siseduze kwaye eyona venkile ikufutshane yokutya yimizuzu eyi-3. Indawo yokupaka esimahla phambi kwendlu yethu.
Nceda uqaphele ukuba kufuneka siqokelele i-3,00 EUR/umntu/ubusuku (abantwana ukuya kutsho kwabayi-6 simahla/abantwana ukusuka ku-7 ukuya kwi-18 - 1,50 EUR) irhafu yabakhenkethi yesixeko xa ufika. I-Airbnb ayiyiqokeleli irhafu okanye ayifake kwixabiso lokubhukisha.
Iflethi inefenitshala epheleleyo, inegumbi lokuhlala elitofotofo elinekhitshi, igumbi lokulala elinye elinebhedi elala abantu ababini, igumbi lokuhlambela elinebhafu, indlu yangasese nendawo yokugcina izinto eyahlukileyo. Kwigumbi lokuhlala kukho isofa esongwayo ukuze abanye abantu ababini balale.
4.91 · Izimvo eziyi-376
Indawo yethu ithule kakhulu kwaye isitalato sethu siyindawo engaboniyo ngoko akukho zinto zininzi zihambayo. Isuphamakethe, izithuthi zikawonke-wonke, ipuli yokuqubha (iKolezija - http://www.sport-ljubljana.si/Kopalisce_Kolezija/), indawo yeYunivesithi (Izilwanyana, iMatreon, isayensi yekhompyutha, iZiko likaJozef Stefan) zikufuphi. Iivenkile zokuthenga, iZoo, ipaki yezemidlalo, ukujima kunye nebala legalufu nazo zikufuphi.
Umbuki zindwendwe ngu- Staša Elina
Sifumaneka ukuze sikuncede okanye sikucebise nanini na, kuba sihlala kwisakhiwo esinye.